Maka: i-imeyili | Martech Zone
Eminyakeni engama-44 eyedlule, uRaymond Tomlinson wayesebenza kwa-ARPANET (owandulela uHulumeni wase-US kwi-Intanethi etholakala emphakathini), wasungula ne-imeyili. Kwakuyinto enhle kakhulu ngoba kuze kube yilelo phuzu, imilayezo yayingathunyelwa kuphela futhi ifundwe kukhompyutha efanayo. Lokhu kuvumele umsebenzisi nendawo okuyiwa kuyo ehlukaniswe uphawu &. Lapho ekhombisa uzakwabo uJerry Burchfiel, impendulo yathi: Ungatsheli muntu! Lokhu akuyona into okufanele ngabe siyasebenza